နီကိုတင်းဖို့စွဲဆန့်ကျင်3ကသဘာဝကုထုံး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား နီကိုတင်းဖို့စွဲဆန့်ကျင် "3 ကသဘာဝကုထုံး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
နီကိုတင်းမှစွဲလမ်းနေတဲ့လေးနက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကဆေးလိပ်သောက်ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဒီအလေ့အထဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်။ သို့သော်ဆေးရွက်ကြီးအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောမှီခိုသူကပိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
ဒီနေ့နီကိုတင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတဖြည်းဖြည်းဆေးလိပ်ဖြတ်သောအခြားအရင်းအမြစ်များကိုရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းသဘာဝအကုထုံးအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကငါတို့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်တစ်ခု option ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သဘာဝကုထုံးနီကိုတင်းစွဲလမ်းကျော်လွှားဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တချို့ options များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်မှာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းအပင်များနှင့်အခြားအပေါင်းများကိုရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါး ¿ Que deben ဖုံးကိုဓားရှည် los del tratamiento Cardiologos farmacológicoမသန်စွမ်း dejar က de fumar? (ဒီအတွက်ကြောင့်နှလုံးအထူးကုဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဖို့ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိထားသင့်တယ်?) အဆိုပါဥရုဂွေးနှလုံးဂျာနယ်, အကွောငျးဖျောပွသ cytisine နီကိုတင်းမှစွဲလမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဘို့သဘာဝ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကလက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာသရုပ်ပြခဲ့သည်။
Cytisine စက်ရုံ၏အစေ့တစ်ခုထုတ်ယူဖြစ်ပါသည် Cytisus laborinum ။ ဒါဟာပြီးသားဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဖို့လူများအတွက်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံများ၌အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရှင်တစ်ဦးကိုသဘာဝ option ကိုနှင့်စားသုံး:
6 တက်ဘလက်ပထမဦးဆုံး3ရက်ပေါင်းကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်
ဒီစက်ရုံများ၏ထုတ်ယူ 25 ရက်ပေါင်းတစ်ကာလအတွင်းစားသုံးရမည်။ ဒီအနီကိုတင်းစွဲလမ်းကျော်လွှားရန်ခန့်မှန်းအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ညွှန်သောက်သုံးသောသကဲ့သို့, ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်အကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာသင်ကယူပြီး start ရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
1 ။ kudzu ကျေးဇူးတင်ဆေးလိပ်ကိုရပ်တန့်
Kudzu (Pueraria Lobata) နီကိုတင်းဖို့စွဲကျော်လွှားရန်နောက်ထပ် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီချုံ၏အမြစ်ကို အသုံးပြု. ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများတားစီး ဆုလာဘ်စနစ်က, ဘယ်ဟာနီကိုတင်းစားသုံးမှုလျှော့ချအားပေးအားမြှောက်။
ဒီသဘာဝအဆေးတစ်လက်လောင်မှကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုက်ညီသော option ကိုရှေးခယျြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
တက်ဘလက်: ကျနော်တို့တစ်နေ့လျှင်ဆေးပြားမှ56 တစ်ထိုးနှင့်အတူစတင်တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့စားသုံးမှုကိုလျှော့ချသင့်တယ်
အမှုန့်: ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအစာမှ add သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်အတွက်ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုရေတစ်ခွက်နှင့်အတူမသောက်ရအကြံပြုကြပါဘူး။ အမှန်မှာက၎င်း၏အရသာမဟုတ်ဘဲမနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိနိုင်ပါသည်
ကောက်နုတ်ချက်: ပေါက်အဖြစ်, ရေဖန်ခွက်ထဲသို့လောင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကိုစားကြလော့။ ဥပမာအားဖြင့်,2တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းထံမှသောက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်
2 ။ homeopathy အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့homeopathy နီကိုတင်းဖို့စွဲကျော်လွှားရန်သဘာဝကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုကယ်မနှုတ်နိုင်သည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။
Homeopathy တစ်ဦးဖြည့်စွတ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ကယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ options များနှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်မကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာနျြးမာရေးအတှကျအဘယ်သူမျှမ cons-လက္ခဏာများရှိသည် homeopathic granules သတ်မှတ်ထားသော။ တဦးတည်းလည်းသုံးနိုငျ Bach ပန်းပွင့်.
မှတ်ချက်: ဆေးရွက်ကြီးစွဲဆန့်ကျင်ကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးအပြည့်အဝသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအားဖြင့်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဆရာဝန်တစ်ဦး၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ယူရမည်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
သာအဆိုပါသဘာရွေးချယ်စရာကျွန်တော်တို့ကိုနီကိုတင်းဖို့စွဲကျော်လွှားကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လေးနက်အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမှာအလုပျလုပျဖို့ကအရေးကြီးတယ်, ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖို့နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအများအပြားအခါသမယအပေါ်ကိုထင်ရှားစွာပြကြလိမ့်မည်ကိုသတိထားပါရန်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့အလိုတော်ငါတို့အစွမ်းသတ္တိအသုံးပြုရမည်နှင့် ကျနော်တို့အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရန်အဘို့အစွဲကိုကျော်လွှားရန်သူတို့၏အာဏာအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ရှိသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဆေးလိပ်ဖြတ် လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အလွယ်တကူသင်သည်ထိုးနိုင်သောနေရာများမှရှောင်ရှားရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဘားကိုသွားလျှင်မူကား, ဆေးလိပ်သောက်ဧရိယာသို့မသွားကြပါဘူး။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါးကအကူအညီခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျလုံးဝဆေးလိပ်မသောက်ရပ်တန့်ရန်သင့်စွဲကျော်လွှားမကြာမီသငျသညျကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်သေချာပါသည်။ သင်တို့အဘို့အခက်ခဲဆုံးကဘာလဲ?
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်:4အစားအသောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှ
ဆေးလိပ်ဖြတ်တိုင်းလူတစ်ဦးကိုသူ၏လမ်းထဲမှာရင်ဆိုင်နေရကြောင်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် celleux ရာလုပျတဲ့သူရှိတယ် celleux Read more »